Semalt: Belang Van Grote Gegevens momba ny Success in Digital Marketing Te Behalen
Ny fampiasana digitale dia manome mpizara marika mba hahafahana mampiasa ny karazan-tserasera, ho an'ny toerana tsara kokoa eo amin'ny tsena. Manao fanapahan-kevitra ara-barotra lehibe kokoa noho ny fampidiran-dresaka. Ny tolotra lehibe dia manampy ny vokatra azo avy amina tetikasa lehibe ho fampiroboroboana ny fampiroboroboana.
Ny fikambanana dia mampiasa ny fampahalalam-baovao mahazatra maro samihafa mba hamerenana ny marketing campaigns. Haka ny goaika avy amin'ny fampitahana, toy ny marketing ara-tsiansa - website phone apps. Ny mpividy dia tsy mahazo fampahalalana vaovao ho an'ny kongresy taranja. Ireo marika famantarana sy fahalalàna amin'ny fampiasana ny vaovao.
Frank Abagnale, de Semalt Customer Success Manager, ny toro-làlana manaraka dia nanampy ireo zavatra ilaina mba hamenoana ny vokatra azo avy amin'ny fampahalalam-baovao ara-tsosialy:
Nifanaraka ny mpiara-miombon'antoka fa ny mpividy dia afaka mandinika sy mandika teny. Ny fampisehoana an-tsary fampahafantarana momba ny tsena ho an'ny mpividy mba hividianana entana. Ny fahaiza-mandanjalanja sy ny fahazoana mamantatra ny zava-misy dia midika fa ny ekipa mpiara-miombon'antoka dia miara-miombon'antoka amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny fahafahana mifandray.
2. Ny mpividy indrindra amin'ny mpanjifa mba hanampy amin'ny mpividy mpanjifa
Mba hampihenana ny fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitra, afaka manampy ny DBA manokana ny manam-pahaizana hanampy amin'ny famahana olana sy ny fampiharana ireo fitaovana analytiques. Ny rindrambaiko fanaraha-maso ny data dia mametraka ny angon-drakitra goavam-be any amin'ny fotoana tsy voafetra. Ny fahafaha-manaon'ireo hetsi-panoherana dia manampy ireo ekipa mpanao varotra amin'ny famolavolana ireo tetikady sy ireo fomba amam-panao izay mety hahatsara kokoa sy azo antoka kokoa ny fitantanana.
3. Ny fanadihadiana dia tsy tokony ho sarotra be
Ny fitadiavam-bola tsy misy ny vola miditra mba hampiasana ny fitaovana ara-pahalalana sy ny lisansa, tsy azo atao ny mamerina, araka ny fandaharam-pahaizana momba ny data izay tsy azo ampiasaina (DaaS). Ireo mpanome fanampim-panafahana an-tariby dia manolotra ireo orinasan-tserasera ivelany azo ampiasaina ho an'ity raharaha ity, izay mety ho azo ampiasaina amin'ny fampiasana ny programa momba ny fampiasana programa amin'ny fampiasana ny nomerao ary amin'ny alàlan'ny volavolan-dalàna. Noho ny tsy fahaizana mampiasa ny fitaovana dia mora ampiasaina ny fitaovana enti-interactive izay mora ampiasaina sy azo ekena.
4. Ny faharetan'ny foto-drafitr'asa ho an'ny drafitra
Miorina amin'ny paikady izay efa nokaravasina, dia ahafahan'ireo mpanao maritiora manatsara ny toetrany mba hahafantarana azy izay mety ho azony. Ny lehibe indrindra dia afaka mamorona amin'ny ankapobeny ho fikatsahana ny tombontsoa amin'ny asa.
Ny fametrahana ny tsena ara-tsolika dia manantena fa ny mpividy dia tsara ny mahafantatra ny angon-drakitra. Ny karazam-panafody manerantany dia mampiasa ny fitaovana ampiasaina amin'ny sehatr'asa sy ny fitaovana fampiasana, interactie interactivités ary fampandrosoana ara-teknika.
Fihetseham-po lehibe nampiasaina mba handraisana ireo mpanjifa
Ny fitaovana an-tserasera an-tserasera dia mahomby amin'ny marketing rehetra. Ny Marketingteams dia mila mianatra momba ny fampiasana ny vokatra rehetra. Izany dia mitarika amin'ny alàlan'ny fanovozan-kevitra hafa, toy ny zo informatika, klanttransactie, hafatra sosialy sy ny hafa, omena ny mpanjifa.
Ny vokatra azo avy amin'ny loharanom-baovao hafa dia azon'ny mpikaroka ampiasaina hanatsarana ny toetr'andro:
Webwinning. Tadiavo ny tranonkala handefa informatika amin'ny fampiasana fitaovana maoderina mba hampahafantarana sy hanamafisana ny informatika sy ny tranonkala. Ny orinasa ihany koa dia mahazo fanampiana ho an'ny rafitra noforonina toy ny famolavolana daty.
Zoek data. Fitaovana fampihetseham-peo amin'ny fitaovana manokana dia mamorona fikarohana sy traikefa detecteren. Izany koa dia miara-miasa amin'ny mpanjifa amin'ny Internet ao amin'ny Internet.
Sociale netwerken. Ireo fanandramana manokana ho an'ny merknamen sy smaakt avy amin'ny hafatra, tiorka, fiarahamonim-bidy, fanaraha-maso ary fanamarihana mba hiarovana.
Ny Crowdsourcing dia miankina amin'ny famerenana ny faharanitan-tserasera amin'ny alàlan'ny fanadihadiana an-tserasera sy ny fanadihadiana.
Ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana dia manome fampahalalana momba ny mpampiasa.
Ny tanjaky ny sehatry ny varotra ara-tsosialy sy ara-barotra dia afaka manatsara ny famoaham-bokatra ary mamela ny mpivarotra am-piadanana mba handraisany ny heviny sy hanomezana tombony.